Sharafta 10 Lite ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Honor 10 Lite ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Sharafta 10 Lite ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay bilo ka hor. Moodelkan, oo faahfaahintiisa buuxda aad awoodid ka akhri xiriiriyahan, wuxuu gaaraa heerka dhexe ee soo saaraha Shiinaha. Soo bandhigitaankeedii ka dib, waxba lagama oga in taleefanka caalamiga ah la bilaabay. Nasiib wanaagse, marka laga hadlayo Spain ma sii sugi doonno mar dambe. Sababtoo ah imaatinka taleefanka ayaa si rasmi ah loogu shaaciyey dalkeenna. Meel dhexe oo la tixgeliyo.
Sharafta 10 Lite waxaa loo soo bandhigay taleefan ahaan qaybtaan loogu yeero heerka dhexe ee dhexdhexaadka ah, maanta moodada. Waxay ku timaaddaa tusaalooyin wanaagsan iyo qiimo aad u hooseeya oo kala duwan. Shaki la'aan, isku-darka ay doonayaan macaamiisha.
Qeexitaankiisa, taleefankani wuxuu xooga saaraa kamaradaha. Gaar ahaan kamaradda iswada wuxuu leeyahay tixgalin gaar ah Honor 10 Lite. Marka waxay umuuqataa taleefan ku habboon dhalinyarada isticmaala. Kaamirooyin wanaagsan, oo leh qaabab badan iyo joogitaanka caqli macmal ah dhexdooda.
Maamuuskan 10 Lite ayaa horay looga iibiyay dalkeenna. Kuwa xiiseynaya inay iibsadaan noocyadan dhexe ee astaanta ah waxay ka awoodaan inay sidaas ka sameeyaan websaydhka astaanta. Hadaad rabto waad heli kartaa link this. Waxay ku timaaddaa noockeeda 3/64 GB oo sidaas ayey ku dhacdaa qiimo kaliya 239 euro. Marka waxay leedahay qiimo wanaagsan oo kala duwan.
Waxaa la xaqiijiyay inuu isna noqon doono iibinta bogga Telefoonka Guriga. In kastoo ilaa iyo hadda uusan jirin ganacsade kale oo la xaqiijiyay. Sida lafilayo waxay sidoo kale gaari doontaa dukaamada kale ee internetka sida Amazon. Laakiin soo saaruhu waxba kamuu sheegin ilaa hadda. Marka waa inaan sugnaa.
Kuwa xiiseynaya iibsashada Maamuuska 10 Lite waxay ku samayn karaan midabyo kala duwan: buluug, madow iyo buluug leh lacag. Midabada oo dhami waxay la yimaadaan saameyn cufan, sidaa darteed moodada maanta ka dhex jirta taleefannada Android. Maxaad u malaynaysaa ku saabsan soosaarista bartankan cusub ee nooc ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Honor 10 Lite ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad ku ilaaliso WhatsApp farahaaga
Sida loo arko farriimaha gaarka ah ee ka socda Facebook Messenger adigoon adeegsan barnaamijka